"Waligay Ma Arag Isagoo Kale..." Thomas Tuchel Oo Magacaabay Xiddigii Kooxdiisa Ee Ka Yaabiyey Kulankii Ay Liverpool Ku Garaaceen | Laacibnet.net
HomeWararka Ciyaaraha Maanta“Waligay Ma Arag Isagoo Kale…” Thomas Tuchel Oo Magacaabay Xiddigii Kooxdiisa Ee Ka Yaabiyey Kulankii Ay Liverpool Ku Garaaceen
“Waligay Ma Arag Isagoo Kale…” Thomas Tuchel Oo Magacaabay Xiddigii Kooxdiisa Ee Ka Yaabiyey Kulankii Ay Liverpool Ku Garaaceen
March 5, 2021 Abdiwahab Ahmed
Tababaraha Chelsea ee Thomas Tuchel ayaa magacaabay xiddig ka tirsan kooxdiisa oo ka yaabiyey intii ay socotay ciyaartii ay xalay ku garaaceen Liverpool oo ay marti ugu ahaayeen Anfield.
Gool uu dhamaadka qaybtii hore u dhaliyey Mason Mount ayaa Chelsea ugu filnaaday inay saddexda dhibcood ka qaadato Liverpool oo ciyaartii shanaad oo isku xigta lagaga badiyey garoonkeeda.
Intii ay ciyaartani socotay, Thomas Tuchel waxa uu ka fikirayay khidadda kulanka iyo sidii uu u dejin lahaa taatiko kooxdiisu ay guusha ku hesho, laakiin haddana waxa uu la dhaygagsanaa oo uu la yaabbanaa ciyaartii yaabka lahayd ee uu soo bandhigay laacibka khadka dhexe ee N’Golo Kante.
Tababaraha reer Germany ayaa markii ay ciyaartu dhamaatay waxa uu amaan kula dul-dhacay Kante oo uu ku sheegay inuu leeyahay ‘hibooyin cajiib ah’ oo ciyaareed, iyadoo uu tilmaamay in aanu waligii arag laacib la mid ah.
Thomas Tuchel oo la hadlayay RMC Sports ayaa yidhi: “Kante waa hadiiyad. Waa ciyaartoy mucjiso ah. Waligay ma arag isaga oo kale. Tababarka iyo ciyaarahaba, marna ma istaago.
“Waxaanu eegnay xogta xoogganaantiisa, waana mid cajiib ah. Dhab ahaantii waa mucjiso.”
Tababaraha Chelsea waxa kale oo uu amaanay difaaca kooxdiisa ee Andreas Christensen oo bandhig cajiib ah samaynayay tan iyo intii uu Thiago Silva dhaawaca ku maqnaa, waxaanu yidhi: “Andreas wuxuu yimid badhtamaha qaybtii hore ee kulankii Tottenham oo ay ahayd in shaqo adag la qabto, laga soo bilaabo daqiiqaddii koowaadna wuxuu ahaa mid cajiib ah.
“Waa geesi, wuxuu ku xooggan yahay hirdanka shaqsiga ah, waana geesi maskax badan marka ay noqoto dhismaha kubadda.
“Waxa uu ku ciyaaraa kalsooni badan, aad ayaanan ugu faraxsanahay bandhiggiisa.”